News Headline | Artist Khabar | Page 4
News Headline	कलाक्षेत्रका ६ आर्टिस्ट जसलाई यो बर्ष गुमाउनु पर्यो	पुस, काठमाडौं । भनिन्छ जन्मेपछि एक दिन सबैले मर्नु पर्छ । फरक यति मात्रै हो कि कोहि छिटै यो संसार छाडेर जान्छन् त कोहि ठिला । तर कुनै मरण बिर्सनै नसकिने भैदिन्छ । त्यस्तै भयो नेपाली कला क्षेत्रलाई पनि यस बर्ष ।
यस बर्ष नेपाली कला क्षेत्रले ६ कलाकारलाई गुमाएको छ । नेपाली संगीतका अग्रजदेखि सिनेमाका पर्दामा देखिएका कलाकारसम्म यसै बर्ष हामिले..	‘लालटिन’को फस्टलुकमा दयाहाङ रार्इ	पुस, काठमाडौं । चलचित्र ‘लालटिन’को फस्टलुक सार्वजनिक गरीएको छ । फस्टलुकमा अभिनेता दयाहाङ रार्इलाई देखाइएको छ । आउँदो चैत १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यस चलचित्रमा दयाहाङ राइ, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारीको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
एमसन पिक्चर्स प्रालिको ब्यानरमा तयार भएको यस चलचित्रलाइ देवकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्..	आज सबैभन्दा कान्छा निर्देशक सौगात बिष्टको जन्मदिन, जान्नुहोस उनका केहिकुरा	गोपिकृष्ण चापागाई / पुस, काठमाडौं । संसारकै सबैभन्दा कान्छा निर्देशक सौगात बिष्टले आज आफ्नो १० औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । बि.सं २०६३ साल पुस २२ गते जन्मिएका सौगात अहिलेसम्मकै साना निर्देशकको रुपमा चिनिन्छन् । उनले आफ्नो पहिलो निर्देशीत चलचित्र 'लभ यु बाबा' बाट चलचित्रमा निर्देशन यात्रा सुरु गरेका हुन् ।
सौगात घट्टेकुलो स्थित आफ्नो घरमा..	चर्चित अभिनेता ओम पुरीको ह्दयघातको कारण निधन	पुस, मुम्बई । बलिउडका चर्चित अभिनेता ओम पुरीको शुक्रवार बिहान ह्दयघातको कारण निधन भएको छ । ६६ बर्षिय पुरीको मुम्बईमा निधन भएको हो ।
अघेरीस्थित उनको घरमा राखिएको शबलाई बलिउडका आर्टिस्टहरुले श्रृद्धाञ्जली दिनेक्रम चलेको छ ।
पुरीले १९७६ मा पुणे फिल्म संस्थानवाट प्रशिक्षण लिएका थिए । सन १९७६ मा मराठी चलचित्रवाट घासीराम कोतवालवाट करिअर..	बिष्णुभक्तसँगै नाटकमा अभिनय गरीरहेका रंगकर्मिहरु के भन्छन् ?	गोपिकृष्ण चापागाई /पुस, काठमाडौं । रंगकर्मि बिष्णुभक्त फुँयालको गएको मंगलबार नाटक गर्दा गर्दै बेहोस भएर निधन भयो । राष्ट्रिय नाँचघर जमलमा जम्मा पाँचशो हुनेभनिएको मध्ये दोस्रो दिनको दोस्रो शो गर्दै गर्दा उहाँको ७९ बर्षको उमेरमा असामाहिक निधन भयो ।
साथै बुधबार उहाँको पार्थिव शरिरलाई प्रज्ञाभवन कमलादीमा राखियो र सयौं कलाकर्मि तथा..	दीपिका पादुकोणले गरी्न आफ्नो जन्मदिनमै १५ घण्टा काम, के काम थियो त्यस्तो ?	पुस, मुम्बई । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले बिहिबार आफ्नो ३१ औं जन्मदिन मनाएकी छिन् । सन् १९८६ मा जन्मिएकी दीपिका यतिखेरकी बलिउडकी चर्चित नायिका हुन् । साथै उनले पछिल्लो समय हलिउडमा पनि काम गरीरहेकी छिन् ।
यसपटक पनि सबैबिधाका आर्टिस्टहरुलाई कार्यक्रममा समेट्ने आयोजकले..	‘लुट २’ को ट्रेलर सार्वजनिक, हेर्नुस कत्तिको मनपर्छ	पुस, काठमाडौं । चलचित्र 'लुट २' को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरीएको छ । निश्चल बस्नेत निर्देशित यस चलचित्रमा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्की, ऋचा शर्मा, कर्मा, सुशिलराज पाण्डे लगायतका आर्टिस्टहरु मुख्य भुमिकामा छन् । माधव वाग्ले र नरेन्द्र महर्जनले निर्माण गरेको यस चलचित्र आउँदो फागुन १३ बाट प्रदर्शन हुने तयारीमा छ ।
रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन रहेको यस गीतमा संजय लामाको छायांकन रहेको छ । सविर श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्रलाई जयन श्रेष्ठले..	Pages:«1234567...114»